Toeram-pitsaharana Iray Kintana Telo Ao Athens Ho An’ireo Mpitsoa-ponenana Ela Nijaliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2016 12:09 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Ελληνικά, русский, Nederlands, Español, English
Ali Jaffari sy ny vadiny, Wajiha, ary ny zanany lahy Shayan, 4 taona, misakafo ao amin'ny efitranon'izy ireo raha toa ny zanany lahy iray hafa mbola matory. Niala avy any Afghanistan ho any Gresy izy rehetra ireo, nanantena ny mbola hanohy ho any Germany. Raikitra ao Gresy izy ireo ankehitriny. Sary: Jodi Hilton/Ivon-toerana Pulitzer momba ny Fitaterana Krizy. Fampiasàna nahazoana alalana.
Tamin'ny 9 May 2016 ity lahatsoratr'i Jeanne Carstensen ity no navoaka voalohany tamin'ny PRI.org ary naverina navoaka eto indray ho ampahany amin'ny fifampizarana votoatiny.
Tsy misy toy izany hoe afaka mametraka ny tongotrao ao anatinà hotely iray tsara tarehy izany taorian'ny làlana lavitra ezaka.
Nandeha an-tongotra lavitra avy any Afghanistan hatrany Athens i Ali Jaffari. Taorian'ny nakàn'ireo Taliban an-keriny sy nandrahonany hamono an'i Ali noho izy efa niasa ho toy ny mpandika teny ho an'ny Amerikana sy miaramila britanika, nandositra haingana ny tanàna niaviany tao Kandahar niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany lahikely roa ilay mpahay siansa momba ny solosaina.
Nampiasainy daholo ny vola rehetra azony tamin'ny fivarotany ny tranony sy ireo fananany rehetra, nanakarama mpitondra azy ireo antsokosoko izy mba hitondra azy ireo, voalohany ho any Pakistàna, avy eo nankany Iràna, Tiorkia ary, farany any Gresy. Nanavatsava gilasy matevina tokony ho 30 sm nandritra ny 16 ora izy ireo niampita ireo sisin-tendrombohitra manelanelana an'i Iràna sy Tiorkia. Hipoka loatra, saika nilentika, ny sambolay nentindry zareo namakivaky ny Aegean avy ao Tiorka mankany amin'ny nosy Grika Samos.
Nikoriana teny amin'ny tavan'i Wajiha vadiny ny ranomaso, raha iny izy eo am-pitantarana ny fiainana nampivarahontsana tao amin'ilay sambokely iny. Tsy mahay milomano izy mivady. Raha nihodidina ny sambolain'izy ireo ny lakan'ny Tiorka Mpiambina Sisintany , niteraka onja goavana, noeritreretiny ho rendrika ry zareo reo sy ireo zananilahy roa, 4 sy 2 taona.
Rehefa tonga tao Athens ry zareo nony farany, tamin'ny tapaky ny volana Martsa, trotraka, naverina nojerena ny fifanarahana mikasika ny fifindràmonina misy eo amin'ny Fiombonambe Eoropeana sy Tiorkia ary nakatona ny làlana Balkan mankany avaratra. Voasakana ny làlan'izy ireo ho any amin'ny fialokalofana niriany tao Alemaina. Nihitsoka tao Gresy ilay fianakaviana, niaraka tamin'ireo mpitsoa-ponenana hafa miisa 54.000 sy ireo mpifindra-monina.
Tsy nisy hotely niandry ireo mpandeha trotraky ny dia. Tao amin'ny tobin'i Ellinikó ivelan'i Athens, no natory i Ali sy ny fianakaviany, tao anaty lay maivana, nandry tamin'ny tany mafy be. Trano fandroana vitsivitsy monja ho an'ny olona an'arivony no nisy tao ary ratsy ny sakafo. Narary ireo ankizy.
Rehefa izany ny herinandro lasa teo, nahazo antso i Ali. I Nikos izany, lehilahy Grika iray nifanena taminy indray andro izay, iray volana lasa tao aminà kianja iray. Nilaza i Nikos fa manana vahaolana ho an'i Ali – hotely iray kintana-telo ao afovoan-tanànan'i Athens. “Niahiahy aho ndrao fitaka izany, ka najanoko tao amin'ny toby ny fianakaviako ary lasa aho namonjy ilay toerana,” hoy Ali.
Nipetraka teo amin'ny gorodona izahay, fomba Afghan io, nihinana paty, akoho ary anana manta tao amin'ny efitrano laharana faha- #532 an'ny Hotely City Plaza tao afovoan-tanànan'i Athens. Zazakely 2 taona no mandrimandry fahalemana teo amin'ny iray amin'ireo fandriana raha toa ilay rahalahiny efa lehibe nilalao an'ireo kilalao biby volovoloina voasesika.
Tsy fitaka mihitsy ilay izy. Nony farany, taorian'ny fifanatsafàn'izy ireo, Afaka nitsotsotra i Ali sy ny ankohonany.
Hotely City Plaza
“Te hanorina fiarahamonina hafa izahay. Ohatran'ny idealista kely,” hoy i Lomani tamiko, nitsiky ampitiavana. “Angamba tsy afaka manova izao tontolo izao isika, fa afaka manova ny manodidina antsika, afaka manova ny tenantsika.”
Roa herinandro lasa izay, nonina tao amin'ny Hotely City Plaza tao Athens i Nasim sy ireo mpikatroka namany ampolony, tranobe iray maoderina misy rihana fito ahitana efitra 110 ao Athens afovoany, izay nakatona efa ho fito taona izay, vokatr'ireo krizy ara-toekarena Grika.
Eny, fibodoana tsy ara-dalàna no misy ao amin'ny City Plaza. Nirohotra nitsofoka tao anatin'ilay tranobe ireo mpikatroka, izay mbola nahitàna ireo fitaovana raitra rehetra teo an-toerana nandritra ny Lalao Olaimpika 2004, ary nanasa ireo mpitsoa-ponenana vitsivitsy tamin'ireo 54.000 vao haingana izay tsy afa-niala tao Gresy mba hipetraka ao. Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, tsy nanao n'inona n'inona hanalàna ireo vahiny vao tonga ireo tomponandraikitra. Nanameloka ny tranga, azo takarina tsara, i Aliki Papachela tompon'ny toerana.
Mandeha manaraka ilay efitrano lehibe mirakotra kapila bakoly sy voarafitra sikotra hazo izahay hatreny amin'ny toerana fandraisana, izay nahitàna ireo fanalahidin'nyefitranoy manjelanjelatra anaty toerany tsirairay avy. Mety ho sahala amin'ny hotely na aiza na aiza io, afa-tsy, angamba, noho ny hamaroan'ireo ankizy sy ny fihazakazahana miakatra sy midina ny tohatra ary ireo tabilao voasoratra tànana mirakitra ny fitsinjarana ireo anjara asa nahantona eny amin'ireo rindrina.
ireo fanalahidin'ny efitrano ao amin'ny Hotely City Plaza ao Athens afovoany, izay nilaozana nandritra ny taona maro, nanomboka hatramin'ny krizy ara-bola nisy tao Gresy, ary vao haingana izay no noraisin'ireo mpikatroka mba handraisana ireo mpitsoa-ponenana. Sary: Jodi Hilton/Ivon-toerana Pulitzer momba ny Fitaterana Krizy. Fampiasàna nahazoana alalana.
Nanazava i Nasim, izay tonga tao Gresy toy ny mpitsoa-ponenana ihany koa efa ho folo taona mahery izay, fa miara-miasa mba manadio ny toerana ary mahandro sakafo in-telo isan'andro ireo tsara sitrapo sy ireo mpitsoa-ponenana. 320 ankehitriny ireo mponina ao, mpitsoa-ponenana, izay sahala amin'i Ali, nahatsiaro ho nangirifiry tao anatin'ireo toby niaraka tamin'ireo tolotra tsy mifanaraka amin'ny fiainana maharitra. Ny ankamaroan'ireo vahiny dia fianakaviana arahan-jazakely avokoa na ireo mpitsoa-ponenana hafa marefo, zaza tsy ampy taona mandeha irery, vehivavy bevohoka na olona kilemaina.
Araka ny fikarohana nataon'ireo mpikatroka Solidarity2refugees, fara-faharatsiny misy 4.000 ireo tranobem-panjakana ao Athens tsy misy mipetraka. Antenain'izy ireo fa haka karazana aingam-panahy avy amin'ny tetikasa Hotely City Plaza ny governemanta Grika sy ny mponina eo an-toerana. “Tsy io irery no olana momba ireo mpitsoa-ponenana”, hoy Nasim. “An'arivony maro ireo Grika no tsy manan-trano ary ireo tranobe ireo afaka ampiasaina mba handraisana ireo olona tsy manan-kialofana, tsy maninona na mpitsoa-ponenana ireo na Grika na hafa koa.”
aha lasitra azo iainana ny fibodoana fananana manokana mba hiatrehana ireo krizy sarobahàna ankehitriny manototra an'i Gresy, miroborobo hatreto ny fiofona vaovao ao amin'ny Hotely City Plaza.
Tsipihin'i Nasim fa ny olana tena maika ho an'ireo mpitsoa-ponenana maro, singanina amin'izany ireo vehivavy, dia tsy ny fahazoana fialofana, fa ny fanànana trano fandroana madio, zavatra izay tena tsy ampy mihintsy any anatin'ny tobin'ireo mpitsoa-ponenana manodidina an'i Gresy. Tsy hoe fotsiny manana efitrano misy trano fandroana ireo vahiny ao amin'ny Hotely City Plaza, fa tafaverina ihany koa ny fahamendrehan'izy ireo.
Fandaozana ny efitrano
Saingy sahala amin'ny Hotely California, mety ho paradisa ny Hotely City Plaza, na mety ho helo.
Tsy misy amin'ireo mpitsoa-ponenana 320 nanana tombony hijanona ao raha ny marina no te-ho vahiny. Ireo krizy ara-toekarena ao Gresy no mahatonga ny firenena tsy maniry handray ireo mpitsoa-ponenana te-hitsambina hanana fiainam-baovao ho azy ireo sy ny fianakaviany. Eo amin'ny fangitra tsy mihetsika eo amin'ny 25 isan-jato mikasika ny tsy fisian'asa ao Gresy sy ny lisitra vaovao mikasika ireo fiepetra vaovao ho fitsitsiana mananontanona, inona ary no fepetra ho raisina mikasika ireo vao tonga?
Maro no mikasa hitaky ny zony ho afaka mangataka fialokalofana. Saingy ireo mpitsoa-ponenana rehetra niresahiko, na dia ho anà fanadihadiana tsy ara-tsiantifika aza natao taminà andian'olona enina notsongaiko kisendrasendra tao amin'ny efitrano fisakafoanana, no nitaraina fa tsy mandeha Skype nolazaina tamin'izy fa azony ampiasaina mba handaminana fotoana hametrahana ny fangatahana fialokalofana. Nilaza i Nasim fa ny ora vitsivitsy monja isan-kerinandro eo amin'ny Skype no azon'ireo mpitso-ponenana miteny Arabo, Farsi ary ireo fiteny hafa, mba hanandramana hifandray amin'ireo tomponandraikitry momba ny fialokalofana.
Fa ho an'i Ali, raim-pianakaviana sambatra izy. Hatreto.
“Tena faly aho ankehitriny mijery ireo zanako tony sy mahazo aina tsara. Saingy mivavaka aho mba hanala anay amin'izao toerana izao ny Firenena Mikambana. Hanokatra ireo sisintany ary hanakatona ireo toby sy ity hotely ity.”
Manaraka ny olan'ireo mpitsoaponenana ao Gresy i Jeanne Carstensen , miaraka amin'ny fanohanan'ny Ivontoerana Pulitzer.